कोहलपुर ६ मा त्रिपक्षिय भिडन्त, कसको पल्ला भारी ?
प्रकाशित मिति : २५ कार्तिक २०७६, सोमबार १४:५४
बाँकेमा उप-निर्वाचनको चहलपहल बढेको छ । कोहलपुर नगरपालिकाको ६ नं. वडामा हुन गईरहेको उपनिर्वाचनले सिङ्गो जिल्ला तातिएको छ । वडाध्यक्ष पदकालागि हुने निर्वाचनमा मुख्य तिन दलले उम्मेदवार टुङ्गो लगाएसँगै चुनावी गतिविधिलाई बढाएका छन ।
२०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनमा काँग्रेसबाट निर्वाचित वडाध्यक्षको मृत्यू भएपछि कोहलपुर ६ मा मंसिर १४ गते उपनिर्वाचन हुँदै छ ।
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले रामशरण थारुलाई उम्मेदवारका रुपमा अगाडी सारेको छ । त्यसैगरी नेपाली काँग्रेसले श्रीकृष्ण थारु र राप्रपा श्रीधर सुवेदीलाई चुनावी मैदानमा उतारेका छन । यसअघि काँग्रेसले जितेको उक्त वडामा अहिले त्रिपक्षिय भीडन्त हुने देखिएको छ ।
चुनावी सरगर्मी बढेसँगै हामीले मुख्य तिन उम्मेदवारको बारेमा छोटो जानकारी प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरेका छौं । को हुन त वडा नं. ६ को वडाध्यक्षका उम्मेदवारहरु, आउनुहोस हेरौं ।
नेकपाले अघि सारेका उम्मेदवार को हुन ?
कोहलपुर ६ को उपनिर्वाचनकालागि सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले रामशरण थारुलाई अगाडी सारेको छ । २०७४ सालको स्थानिय निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रबाट वडाध्यक्षको उम्मेदवार बनेका थारुलाई नेकपाले पुन टिकट दिएको हो ।
वि.सं. २०४६ साल माघ १ गते साविकको रझेना गाविसमा जन्मीएका थारु तेस्रो पटक चुनावी मैदानमा होमिएका छन । २०६९ सालमा पहिलो पटक सिद्धार्थ प्रा.वि. को विद्यालय ब्यवस्थापन समिति सदस्यमा निर्वाचित भएका थारुले २०७४ सालको स्थानिय निर्वाचनमा भने पराजय भोग्नुपर्यो । ०७४ सालको निर्वाचनमा तेस्रो स्थान हासिल गरेका थारु यस पटक भने विजयी हुनेमा ढुक्क छन ।
राजनितिक परिवेशमा हुर्किएका थारुले २०६२ सालमा तत्कालिन नेकपा माओवादीको पार्टी सदस्यता लिएका थिए । माध्यामिक तहसम्म अध्ययन गरेका थारु ईमानदार र स्वच्छ छविका कारण स्थानियस्तरमा लोकप्रिय नेताका रुपमा स्थापित छन ।
‘हामीले जितिसक्यौ, घोषणा गर्न बाँकी छ’
वडामा पहिलो पटक केन्द्रिय स्तरको नेता ल्याउन सफल भएका थारुले आफ्नो जित सुनिश्चित भएको बताए । नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नै वडाको चुनावी सभामा उपस्थित भएकाले नेकपाप्रति स्थानियहरुको विश्वास बढेको थारुको बुझाई छ । तत्कालिन एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेकपाले ६ नं. वडामा बहुमत ल्याउने थारुले दाबी गरे ।
केन्द्रियस्तरका नेताहरुसँग प्रत्यक्ष पहुँचमा रहेकाले केन्द्रसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित गरी वडाको विकासकालागि दिर्घकालीन योजनाहरु लागु गराउने योजनामा छन रामशरण थारु । कुल २०३८ मतदाता रहेको कोहलपुर ६ मा थारु समुदायको वाहुल्यता रहेपनि सबै जातीलाई समेटेर अघि बढ्ने थारु बताउँछन ।
निस्वार्थ सेवामा खट्ने प्रतिवद्धता
नेकपा ६ नं. वडा कमिटिका सचिव समेत रहेका थारु विगतदेखी नै सामाजिक क्षेत्रमा क्रियाशिल हुँदै आएका छन । ०७४ सालमा वडाध्यक्ष पदमा पराजित भएपनि वडाको विकासकालागि अहोरात्र खटिएको थारुको भनाई छ । वडाभित्र विद्युतिकरण, सडक निर्माण लगायत अन्य भौतिक पुर्वाधार विकास अहोरात्र खटिने थारु वडालाई नमुना भएको हेर्न चाहन्छन ।
निर्वाचन भएपछिको पहिलो प्राथमिकतामा वडाभित्रका पुर्वाधार निर्माणलाई राखेको छु, थारुले भने, ‘भौतिक पुर्वाधारको विकास नभएसम्म वडाको विकास सम्भव छैन ।’ वडामा निशुल्क शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउनुकासाथै बेरोजगार युवाहरुलाई स्वरोजगार बनाउन विभिन्न सिपमुलक तालिमको ब्यवस्था मिलाउने, सामुदायीक भवन निर्माण गर्ने, सडक स्तरोन्नतीका साथै कालोपत्रे गर्ने, खानेपानी समस्या समाधान गर्ने, खेतियोग्य जमिन जोगाउन सुतैया नालामा तटबन्धन गर्ने लगायत योजनालाई सार्थकता दिन पनि आफ्नो जित अपरिहार्य रहेको थारु बताउँछन ।
फोरम लोकतान्त्रीक हुँदै काँग्रेसबाट उम्मेदवार बनेका श्रीकृष्ण थारु
२०३५ साल भाद्र १५ गते साविकको रझेना गाविस वडा नं. ७ एवम् हाल कोहलपुर नगरपालिका वडा नं. ६ मा जन्मेका श्री कृष्ण परिवारका माइलो सन्तान हुन् । राजनीतिक तथा सामाजिक सहिष्णु सहितको परिवारमा हुर्केका उनले सानै उमेरदेखि राजनीतिलाई नजिकबाट नियाल्न पाए । उनका दिवंगत हजुरवुवा पञ्चायतकालदेखि मृत्युपर्यन्तसम्म राजनीति र समाजसेवामा तल्लिन रहेका थिए । र उनको पिता टिकाराम थारु पनि पञ्चायतकालेखि हालसम्म राजनीति, समाजसेवामा सक्रिय छन् । हजुरवुवाको राजनीतिक कालेखि घरमा राजनीतिक पृष्ठभूमीका व्यक्तिहरुको आवत जावत र राजनीतिक भेटघाट तथा छलफल प्रायजस्तो भइरहन्थ्यो, उनी भन्छन, ‘सोही समयदेखि राजनीतिक चेतनाको विकास भयो र विस्तारै राजनीतिलाई बुझ्ने अवशर पाएँ, यो ने मेरो राजनीतिक शुरुवाती दिनहरु रहे ।’ शालिन तथा भद्र स्वभावका श्री कृष्ण बडघर (थारु समुदायको समुदायस्तरको सर्वमान्य न्यायिक संयन्त्र) को सह सचिव समेत रहेर काम गरे । जसबाट उनले थारु समुदायमा हुने विभिन्न समस्या, चुनौती र चेतनास्तरलाई राम्रोसँग बुझ्ने मौका पाए । समुदायमा हुने सबै प्रकारका विवाद, झैझगडा लगाएतका विवादित कुराहरुलाई बडघरले नै मेलमिलाप गराउनेदेखि आवश्यक परे न्यायिक फैसला समेत सुनाउनेसम्मको अधिकार रहन्थ्यो, बडघर समुदायमा सर्वमान्य न्यायिक संयन्त्र भएकाले उनी समुदायमा लोकप्रिय र सफल सामाजिक व्यक्तित्वको छवि बनाउन सफल भए । अहिले पनि समुदायस्तरमा हुने विभिन्न पुजा, भण्डारा लगाएतका धार्मिक गतिविधीहरुमा उनले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् । थारु कला संस्कृतीको संरक्षण एवम् सम्वद्र्वनमा क्रियाशील श्री कृष्ण वडा नं. ६ लाई थारु समुदाय, पहाडी समुदाय र मधेशी समुदायको सामाजिक मेलमिलाप, सामाजिक सहिष्णु सहितको वडाका रुपमा नमूना वडाका रुपमा विकास गर्न जस्तो सुकै परिस्थितीको सामना गर्न पनि तयार रहेको बताउँछन् । वडा नं. ६ लाई भौतिक पूर्वाधार सम्पन्न वडाका रुपमा विकास गरेर छिमेकी वडाहरुसँग पूर्वाधार एवम् आधुनिक भौतिक संरचना सहित जोड्न कुनै कसर बाँकी नराख्ने उनको भनाई छ ।
वडामा रहेको सिद्वार्थ आधारभूत विद्यालयको विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षमा उनलाई सर्वसम्मत रुपमा चयन गरिएपछि विद्यालयको सर्वाङ्गिण विकासमा उनले पुर्याउनको योगदानको वडावासीले मुक्तकण्ठले प्रशंसा गर्ने गरेका छन् ।
उनकै कार्यकालमा विद्यालयमा लामो समयदेखि कक्षा कोठाको अभाव अन्त्य भएको थियो । तत्कालिन समयमा उनकै पहलमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयले भनव निर्माणका लागि रकम बिनियोजन गरेको थियो । यस्तै विद्यालयमा पुस्तकालयको आवश्यकतालाई महशुस गरेर रुम टु रिड संस्थाको सहयोगमा विद्यालयमा पुस्तकालय स्थापना गर्न सफल भएका थिए । उनको कार्यकालमा विद्यालयमा कुनै पनि आर्थिक विवादको सामना गर्नु परेन । उनी भन्छन्, ‘चुनावको समयमा म माथि नियोजित रुपमा आर्थिक अनियमितताको प्रश्न उठाईछ तर यो विषयमा म बोल्नै परेन, विद्यालयले नै मेरो कार्यकालमा कुनै पनि आर्थिक अनियमिमता नभएको र मेरो नाममा कुनै पनि बेरुजी रकम बाँकी नरहेको स्पष्ट पारिदिएको छ ।’ उनकै कार्यकालमा विद्यालयको भौतिक विकासका लागि आयोजना गरिएको महायज्ञलाई सफल पार्न उनले अतुलनीय योगदान दिएको वडावासीको भनाई छ ।
कोहलपुर नगरपालिका अन्र्तगतको वडा नं. ६ मा विशेष गरी थारु समुदायमा देखिने सिकलसेल एनिमिया र (हात्तीपाइले रोग) फाइलेरियाबाट संक्रमित व्यक्तिहरुको पहिचान गरी उपचारका लागि उनले देखाएको तत्परताबाट वडावासीहरुमाझ अझ लोकप्रिय बनेका थिए । विभिन्न सचेतनामूलक गतिविधीहरु सहित उनी वडालाई सिकलसेल र फाइलेरिया मुक्त वडाका रुपमा विकास गर्न अझै पनि समुदायस्तरमा सक्रिय नै छन् । प्रवेशिका तहसम्मको अध्ययन गरेका श्री कृष्ण नगर क्षेत्रका कुशल डकर्मी समेत हुन् । शैक्षिक दिगो विकास र पूर्ण सरसफाई सहितको वडाका रुपमा वडा नं. ६ लाई विकसित गर्दै भौतिक पूर्वाधारसम्पन्न वडाको रुपमा विकास गर्न निर्वाचनमा पराजय व्यहोरेपनि कहिलेपनि यो अभियानबट विमुख नहुने उनको भनाई छ । २ पटक विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षको रुपमा एक पटक संविधान सभाको निर्वाचनमा समानुपातिक उमेद्वारका रुपमा र अहिले वडाध्यक्षको उमेद्वारका रुपमा आपूmलाई अगाडी उभ्याएका श्री कृष्ण आफुलाई अन्य दलहरुले अघि सारेका उमेद्वारहरुको तुलनामा फरक मान्छन र वडावासीको आपसी सद्भाव, बन्धुत्वको भावना र सदा साहयताका कारण फराकिलो मतान्तरले बिजय हुनेमा ढुक्क छन् ।
को हुन राप्रपाले अघि सारेका उम्मेदवार सुबेदी ?
साविकको रझेना गाविस वडा नं. ७ मा जन्मिएका श्रीधर सुबेदीले २०५८ साल देखी कोहलपुर साप्ताहिकबाट पत्रकारिता शुरु गरेका थिए । राजनीति र समाजसेवा प्रति विशेष चासो बोकेका उनी पत्रकारीतासँगै प्रजातन्त्रप्रति आस्था राख्ने पत्रकारहरुको संगठन नेपाल प्रेस युनियनमा आवद्ध भए । उनले स्वतन्त्र समाचार सेवा काठमाडौं, नेपाल एफएम (काठमाडौं), श्री अभिलेख साप्ताहिक (मलेशिया) हुँदै आफ्नो पत्रकारीता यात्रालाई निरन्तरता दिए ।
२०६३ देखी प्रकाशन शुरु गरिएको श्री अभिलेख साप्ताहिकमा सुबेदी कार्यकारी सम्पादक थिए । यो पत्रिका मलेसियामा समेत प्रकाशित हुन्थ्यो र मलेसियामा रहेका नेपालीमाझ निक्कै लोकप्रिय थियो । पत्रिका प्रकाशनको क्रममा मलेसियामा रहँदा उनले नेपाल पत्रकार महासंघ मलेसिया शाखाको गठन गरेका थिए । उनी महासंघ मलेसिया शाखाको संस्थापक सचिव हुन् । मलेसियामै रहँदा उनीले राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) को मलेसिया प्रतिनिधि समेत रहेर काम गरेका थिए । स्वदेश फर्किएर उनले २०६७ बाट कोहलपुरमै न्युज नमस्ते दैनिक पत्रिकाको प्रकाशन शुरु गरे । उनले न्युज नमस्ते मार्फत स्थानीय क्षेत्रमा भइरहेका भ्रष्टाचारविरुद्ध धावा बोलेका थिए । २०७३ मा उनी कोहलपुर टेलिभिजनको प्रवन्ध निर्देशक भएका थिए ।
‘कमल थापाको दिक्षा, डा. धवल शम्शेरको शिक्षा’
प्रारम्भमा नेपाली काँग्रेससँग आवद्ध भएका सुवेदी अहिले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) मा आवद्ध छन् । काँग्रेस नेता वीपी कोइरालाको प्रजातान्त्रिक समावजाद र राष्ट्रिय मेलमिलापको नीतिप्रति प्राभावित भएर उनी काँग्रेसमा आवद्ध भएका थिए । कोहलपुरमै रहँदा नेपाल प्रेस युनियनमा आवद्ध उनी पत्रिका प्रशासनको क्रममा मलेसियामा रहँदा नेपाली कांग्रेस निकट संगठन नेपाली जनसम्पर्क समिति मलेशियाको संस्थापक सचिव भए । मलेशियाबाटै महाधिवेशन प्रतिनिधी समेत भएका थिए ।
मुलुकको परिवर्तित अवस्थामा राष्ट्रियताको संरक्षण तथा सनातन धर्म, संस्कृति र पहिचानको सम्बद्र्धनबाट मात्र देश बलियो हुने, राष्ट्रिय सम्बृद्धिको लक्ष्य हासिल हुने र विपिको प्रजातान्त्रिक समाजवादबाट काँग्रेस च्यूत हुँदै गएको अनुभुतीपश्चात उनी काँग्रेस परित्याग गरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालमा आवद्ध भए । उनलाई राप्रपाका केन्द्रीय सदस्य हिक्मत ढकालको पहलमा तत्कालिन राप्रपाका केन्द्रिय उपाध्यक्ष एवं हाल नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका मेयर डा. धवलशम्सेर राणाले पार्टीमा प्रवेश गराएका थिए ।
वडा सदस्य देखि राजनीति सुरु गरेका सुवेदी राप्रपा नेपाल बाँकेको जिल्ला सदस्यसँगै जिल्लाको पार्टी प्रवक्ता समेत भइसकेका छन् । राप्रपा नेपाल निकट पत्रकारहरुको संगठन मिडिया नेपालको केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका सुवेदी २०७४ देखि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको केन्द्रीय सूचना प्रविधि विभागको सदस्य सचिवको पदमा कार्यरत छन् । पत्रकारीतमार्फत समाजको समस्या नजिकबाट बुझेका सुवेदीकालागि कोहलपुर क्षेत्र त्यसमा पनि विशेष वडा नं. ६ को समस्या नौलो हैन । स्थानीय निकायबाट भइरहेका गतिविधी र गर्न सकिने कामबारे उनी जानकार छन् । युवाहरुमाझ अत्यन्तै लोकप्रिय सुवेदी मिलनसार स्वभावका छन । आफू जन्मे हुर्किएको क्षेत्रलाई विकासको नमुना क्षेत्र बनाउने चाह भएका यूवा नेता सुवेदी डा. धवलशम्सेरको विकासको मोडलबाट प्रभावित छन् ।
सुवेदीले राप्रपाका केन्द्रीय उपाध्यक्ष तथा पूर्व मन्त्री प्रेम बहादुर भण्डारीले यस क्षेत्रको विकासमा पुर्याएको योगदानलाई प्रेरणा र मार्गनिर्देशनको रुपमा आत्मसाथ गर्दै आएका छन् । राष्ट्रियता, धर्म र सनातन परम्पराबारे राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापाबाट दिक्षित उनी ‘आफ्नो क्षेत्र, आफ्नो सान, कोहलपुरमा वडा नं. ६ को छुट्टै मान’ को मुललक्ष्य सहित कोहलपुर नगरपालिका वडा नं. ६ को वडा अध्यक्षको उम्मेदवार बनेका छन् ।
बाँके, बर्दिया र सुर्खेतका ४ जनामा कोरोना संक्रमण
भेरी अस्पताल नेपालगन्जमा गरिएको परिक्षणमा थप ४ जनालाई कोरोना संक्रमण देखिएको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा ३०० जनाको स्वाब परिक्षण गरीएकोमा बाँकेका २ जना तथा...
भारतको श्रीवस्ती हुँदै बाँके पस्यो सलह
भारतको श्रीवस्ती हुँदै सलहको झुण्ड बाँके प्रवेश गरेको छ । बिहिबार बिहान नेपालगन्जको आकाशमा सलहको झुण्ड देखापरेको हो । भारतका विभिन्न नाका हुँदै नेपाल...
आन्तरिक राजश्व कार्यालयमा हेल्प डेक्स स्थापना
नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघले आन्तरिक राजश्व कार्यालयमा बिहिवार हेल्प डेक्स स्थापना गरेको छ । कर कार्यालयसंग सम्बन्धीत व्यवसायीक समस्या समाधानको सहजिकरणका...
काठमाण्डौमा गुड्न थाले साझा यातायातका गाडी
काठमाण्डौ उपत्यकामा आजदेखि साझा बस पनि गुड्न थालेको छ । ७१ वटा बसमध्ये आजदेखि २६ वटा बस विभिन्न रुटमा चलाउन थालिएको साझा यातायातका कायममुकायम प्रमुख कार्यकारी...
जल तथा मौसम विज्ञान विभागले बिहीबारको मौसम पूर्वानुमान जारी गरेको छ । पूर्वानुमानमा उल्लेख भए अनुसार हाल नेपालभर मनसुनी वायु को प्रभाव छ । साथै मनसूनी...
एनटिभी कोहलपुर प्रादेशिक च्यानलमा रुपान्तरण
नेपाल टेलिभिजनको कोहलपुर प्रसारण केन्द्रलाई प्रादेशिक च्यानलका रुपमा रुपान्तरण गरीएको छ । नेपाल टेलिभिजनका महाप्रबन्धक गोविन्द रोकाले साउन १ गतेदेखी...